प्रवासमा रहेर नेपालि गितसंगितलाई माया ! सतिश अधिकारीका शब्दले रुवायो सारा नेपालीलाई…(भिडियो) – Bannigadhi Today
प्रवासमा रहेर नेपालि गितसंगितलाई माया ! सतिश अधिकारीका शब्दले रुवायो सारा नेपालीलाई…(भिडियो)
धनराज साउँद २०७७ असार १४, आईतबार ०८:०१
काठमाडौं :पछिल्लो समय सबैको मन मुटुमा बसेकी बाल गायिका आयुसा गौतमले आवाज दिएको फेरी अर्को नया तीज गीत बजारमा आएको छ।गीतमा चर्चित गायिका गीता देबी र चर्चित गायक हेमन्त रसाइली कान्छाले आयुसा गौतमलाई आवाजमा साथ् दिएका छन।”फुली नाकैमा”को सफलतासंगै आयुसा गौतमको यो अर्को उत्कृष्ट गीत हो । सतिस अधिकारीले शब्द कोरेको यो गित छोटो समयमा नै सर्वाधिक चर्चामा चुलिएको छ । प्रवासमा रहेर पनि नेपालि गीतसंगीतलाई माया गर्नु भएको छ । अधिकारि कै परिकल्पनामा तयार भएको म्युजिक भिडियो यो हाम्रो समाजमा घटेका सत्यातथ्या घटनामा आधारित रहेर वास्तविक घटनालाई चित्रण गरेका छन् ।
देबेन्द्र कुँवरको निर्देशनमा रहेको तिज गीत बजारमा आएको छ । कुवरले अहिलेसम्म दर्जनभन्दा बढी फिल्म,बिज्ञापनको साथै हजारौंको संख्यामा प्रोग्राम अनि म्युजिक भिडियोहरुको कोरियोग्राफीसंगै निर्देशन पनि गरिसकेका छन् । बिगत लामो समय देखि यसै क्षेत्रमा लागेका कुवर यतिबेला सिखर चुम्ने क्रममा छन् । भखरै मात्र S3K Entertainment को प्रस्तुतिमा बजारमा आएको आयुषा गौतम,गिता देवि र हेमन्त कान्छा रसाईलिको स्वरमा रहेको “बिधुवा”गीतले चर्चा कमाउदै गएको छ । सो गित निर्देशन देबेन्द्र कुँवरले नै गर्नु भएको थियो । अहिले सो गित सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नपुग्दै युटुब ट्रेडिङमा आएको छ । कुवरले निर्देशन गरेका म्युजिक भिडियो मध्ये यति छोटो समयमा नै चर्चा कमाउन सफल यो पहिलो म्युजिक भिडियो हो ।
शम्भु चालिसेले छायांकन गरेको भिडियो भित्र चर्चित कलाकारहरु सुरबीर पण्डित ,राम चन्द्र अधिकारी,लक्ष्मी गिरी,चक्र साउद आर सी ,आयुसा गौतम र गीता देबिको रहेको छ । गीतमा शब्द भने सतिस अधिकारीले कोरेका छन । हेमन्त रसाइली कान्छाको संगीत रहेको गीत निकै मार्मिक बनेर आएको हो।गीतमा सासु बुहारीको कहानी संगै एक बिधुवा नारीको बास्तबिक कथा जोडिएको छ।तीजको नाम दिएर बजारमा आएको गीत को पूर्ण सफलताको शुभकामना छ।भिडियो हेरौ :
क्याटेगोरी : गीत संगीत, मनाेरञ्जन, समाचार